Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ France Tiemoue Bakayoko Nwa akwukwo akuko nke oma
LB na-egosi Full Story of a Midfield Engine nke amara aha ya; 'Bakoko'. Nwa anyi nke Tiemoue Bakayoko Akuko na ihe omuma ihe omuma na eme ka unu buru akuko banyere ihe omuma ihe site na nwata rue oge. Ihe omumu ya bu ihe omuma nke ndu ya tupu ama aha ya, ndu ndu ya na otutu ihe banyere ya. Ugbu a na-enweghị n'ihu adieu, Na-amalite.
Tiemoue Bakayoko Nwa akwukwo akuko nke oma bu eziokwu: Ndụ mbido
A mụrụ Bakayoko na Paris na 17 August 1994 maka ndị nne na nna si na Ivory Coast kwaga isi obodo France iji mee ka ndụ ka mma.
Dị ka ọtụtụ n'ime ụmụ abụọ ya, ọ bụ onye nketa French-Ivorian. Mgbe ọ na-etolite, ọ bi n'ógbè dị nso na Barbès bụ nke nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị Africa. Ọ bụ agbata obi na Paris na-emekarị mara maka ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị ojii si na ndị si mba Africa kwabata.
Tiemoue Bakayoko mgbe ọ bụ nwata hụrụ ka ndị mụrụ ya na-arụ ọrụ niile dị egwu ọrụ iji tinye ihe oriri na tebụl ma zipụ ndị ego ka ezinyere ezinụlọ ha na Ivory Coast. Otutu oru ndi mmadu na-aru n'oge ahu gbasoro ndi Afrika noo, obuna ndi guru akwukwo. Ịga ụlọ akwụkwọ abụghị ihe kacha mkpa maka nwatakịrị ahụ.
Tiemoue Bakayoko Nwa akwukwo akuko nke oma bu eziokwu: Site n'ike mmụọ nke iko ụwa
dị nnọọ ka Sadio Mane, enye ama odudu spirit ke itieutom ebe ke Ufọk-n̄kpọkọbi World 1998 World. O juru ya anya nke ukwuu site n'ịhụ Senegal, onye agbata obi ya n'ala nna ya (Ivory Coast) nke na-apụ France na-emeghe ma na-ele France ka ọ na-agbadata ikwu okwu ebube nke asọmpi ahụ.
Dị ka ya si kwuo, "Mgbagwoju anya nke ndị isi ojii French a ma ama na ndị otu. Abụ m onye hụrụ ndị agbachitere ukwu na ndị na-agbachitere na-agbachitere nchebe n'anya. Mmasị Patrick Vieira, Lilian Thuram na Marcel Desailly bụ ọkacha mmasị m. Ọrụ ha mere ka m bụrụ ọrụ. Otú ọ dị, enweghị m ike ịkwụsị ịkpọtụrụ Claude Makalele bụ onye tọrọ ntọala nke ihe m ghọworo. "
Dika otutu ndi ozo n'adiri oji, akwukwo akwusiwo maka Bakayoko, ya na football n'egbuputa mgbe mmepe nke French 1998. Nne na nna ya ghọtara ọkpụkpọ ya ma nye nkwado niile ọ chọrọ iji nwee mmalite dị mma. Ha debara ya aha na ụlọ akwụkwọ mmuta (Le football de PARIS 15) mgbe ọ dị afọ 5.
Bakayoko gosipụtara ọkwa kachasị mma mgbe ọ na-egwu bọlbụ na ọkwa agụmakwụkwọ mbụ ya. Ọ na-agafe karịa ụmụaka na agụmakwụkwọ nakwa na ọ bụ mgbe ụfọdụ ka okpueze dị ka ụmụ amaala kachasị mma. Paris 15 chebere ya ruo afọ anọ (ruo na 9) tupu ya ahapụ ndị nne na nna ya ka ha nwee ike ịgbanwe ọkụ na ụlọ akwụkwọ ka mma -CA Paris Charenton. Ọ na-egwuri egwu otu afọ na Charenton tupu ya agafee ọzọ Montrogue FC 92. N'ụlọ a, ọ na-ezute nsogbu na-enweghị mgbagha, mmiri mmiri.
Tiemoue Bakayoko Nwa akwukwo akuko nke oma bu eziokwu:Ahụhụ
Dịka onye na-eto eto (afọ 10) mgbe ọ na-egwu maka Montrogue FC 92, Bakayoko gbajiri ụkwụ site na ihe ọ kpọrọ 'nsogbu aka' site na onye iro. Ọdịdị nke mmerụ ahụ kpatara ogologo oge kwụsị ọrụ ya.
"Oge ụfọdụ ka m hụrụ ka m na-eto eto na-abịa na njedebe na-adịghị agwụ agwụ". Ọ bụ oge m ga-ata ahụhụ. My usoro mgbake dị ngwa ma ọ hụrụ na m na-anọ fọrọ nke nta 3 afọ na-enweghị na-egwu football " ka Bakayoko na-ekwu.
Tiemoue Bakayoko Nwa akwukwo akuko nke oma bu eziokwu:jụrụ Ajụ
N'afọ 2008, a kwadoro mgbapụta zuru oke site na mgbakasị oyi oyi. Ọ bụ naanị afọ 13 ka ọ dị n'oge ahụ. Ọ na-echere izu ole na ole iji kwado mgbake zuru oke tupu ya eburu ebe ọ na-arụ ọrụ ya. Ọ dị mwute na ọ dịghị osisi họpụtara ya n'ihi ụkọ ọdịdị ya. Ọ na-ata ahụhụ ọbụna site na ụlọ akwụkwọ mmuta ọ gara aga.
Ọ bụ agụmakwụkwọ football na Rennes nke mesịrị nye ya ohere iji nwetaghachi akwụkwọ ya mgbe ọtụtụ ndị na-eche echiche. Ha weere n'eziokwu ahụ bụ na ọ dị elu na klọb ochie ya. Nke a mere na 2009 mgbe ọ bụ naanị 14 afọ.
Tiemoue Bakayoko Nwa akwukwo akuko nke oma bu eziokwu:Na-eso nzọụkwụ Makalele
Mgbe oge abụọ mbụ ya na Monaco, bụ nke o mere 31 Ligue 1 ngosi, Bakayoko kpebiri ịgbanwe àgwà ya iji mezuo ikike ya. All thanks to his mentor, Claude Makalele onye a họpụtara dịka onye nduzi nkà na ụzụ Monaco na January 2016.
Ọrụ Makalele ka Bakayoko
Dị ka Bakayoko si kwuo,
"Makellé nyeere m aka nke ukwuu. Mgbe ọ bịarutere Monaco abụghị m ezigbo onye egwuregwu, ma mụ na ya nwere nnukwu mkparịta ụka. O nyere m ọtụtụ ndụmọdụ ma kụziere m otú m ga-esi na-egwu egwuregwu bọlbụ karịa. Ọbụna o kwere ka m kpọọ ya maka enyemaka enyemaka ọzọ. "
Tiemoue Bakayoko Nwa akwukwo akuko nke oma bu eziokwu:Ntozu Ogologo
N'oge na-adịghị anya tupu ya achọpụta na ya nwere ike ilekọta onwe ya ka ọ ghara ile ya. Na pitch, ọ ghọrọ onye na-amalite mgbe nile maka Monaco, na-enyere ụlọ ọrụ ahụ aka nchịkọta 1 aha na oge 2016 / 2017. Ọ bụghị nanị na ọ kwadoro onwe ya dị ka akụkụ dị mkpa nke ndị otu na-eme egwuregwu Monaco, na-enweghi mmerụ ahụ na ngwa ya n'oge ọzụzụ adịghịzi akatọ.
Bakayoko ntozu usoro iheomume
Taa, Bakayoko emesiri tolite. O tinye ike na ọhụụ ya n'etiti etiti etiti etiti.
Tiemoue Bakayoko Nwa akwukwo akuko nke oma bu eziokwu:Style nke Play
Ejiri Bakayoko tụnyere Yaya Touré n'ihi ike ya nile n'inweghari uche, ọgụgụ isi nke egwuregwu ahụ, ikike ịghafe ihe na-aga ma mezuo nsị, ịgafe ma dribbling. Ihe kachasị mkpa ya bụ ọdịdị ahụ ya na egwuregwu ya.
Style Bayo nke Bayoko
Ọ bụ onye ọkachamara na ọrụ nchebe nke etiti. Ikike ya nke ịkwụsị mwakpo na ịmegharị ụgbọala na-agba ọsọ bụ ihe naanị mmadụ abụọ (Gabi na Danny Drinkwater) nwetara karịa na oge 2016 / 2017.
Akara akwụ ụgwọ Bakayoko
Ihe oriri Bakayoko na Monaco, Leonardo Jardim, ozugbo kwuru, sị: "Ọ na-enweta ọtụtụ bọọlụ, na-eme ka ndị otu ahụ nwee ike. Ọ na-agba bọl ahụ nke ọma ma na-enweta ọbọgwụ ya. Nke ahụ bụ ọrụ Bakayoko. Ọ bụ onye na-eme egwuregwu zuru ezu, otu egwuregwu dị mkpa, ọ dị mma na mgbake ma na-atụle ihe mgbaru ọsọ siri ike. "
Tiemoue Bakayoko Nwa akwukwo akuko nke oma bu eziokwu:The Black Knight
N'ime àgwà niile o nwere, ike gwụrụ na Bayoko siri ike n'ebe ahụ, nke ahụ bụkwa ihe ọ na-ere.
Lot nke ndị mmadụ jụrụ ya ihe kpatara ya ji etinye mkpuchi? ... Ugbu a, anyị na-enye gị azịza ya.
Bakayoko mebiri imi ya mgbe ọ na-azụ ya gaa na Monaco nke Njikọ Njikọ nke ikpeazụ na nke ikpeazụ megide Juventus.
O kweghị ka nke ahụ gbochie ya ịmalite ndị Ịtali, ma kpebie ịgbanye ákwà mkpuchi nchebe dị iche iche na-echebe ya nke mere ka ọ bụrụ ikuku nke ihe dị ịtụnanya na aha nke 'Egwurugwu Gbara Ọchịchị'.
Bakayoko ka na-enwe ihe mgbu na ikpere ụkwụ aka ekpe ya. Dika edere ya n'elu, o meriri uzo ozo na agbajiri agbaji dika nwata.
Tiemoue Bakayoko Nwa akwukwo akuko nke oma bu eziokwu:Site na pink ruo nwa (Nkebi 2)
N'okwu ahụ, Bakayoko nwetara ngbanwe dịgasị iche na ndụ ya Mgbe ya na onye mbụ nke mba France bụ Claude Makalele bịa. O gbanwee site n'inwe ihe kwesiri ihu ya.
Taa, ọ na-eche echiche, ma na na na pitch. Ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ na-ele ya anya, ọ bụghị onye na-acha odo odo mgbe ọ na-ahụ ya, na-etinye ntutu isi ya n'isi otu ụbọchị, na-acha ọbara ọbara.
Azụ Azụ Bakayoko
Mgbe ọ bịarutere Monaco na 2014, ọ pụrụ ịhụ na ọ na-amalite site na njedebe nke ụlọ ezumike mara mma n'azụ ụgbọala nke Porsche Cayenne pink.
Bakayoko gbanwere akpụkpọ ụkwụ ya niile site na pink ruo nwa ojii. Tụkwasị na nke ahụ, ọ malitere ịkụ ọkpọ ma gbanwee nri ya ma mee ka ike ya dịkwuo mma.
Ma mgbe oké osimiri gbanwere n'àgwà, nke onye nkụzi ya na-eto eto na Rennes mere n'oge ahụ, ọ gbapụrụ ụlọ ahụ maka ụlọ dị mma karị ma nweta akwụkwọ ojii Cayenne. Ọ kọwara, sị: "Ha na-ekwu na m hụrụ ihe ndị dị mma n'anya ná ndụ, na ọ bụghị ihe mgbochi, na m ga-abịa (Monaco) nanị maka ụgwọ dị elu, nke ahụ abụghị ikpe."
Tiemoue Bakayoko Nwa akwukwo akuko nke oma bu eziokwu:Kedu nọmba ya?
Bakayoko tinyere nọmba 14 na jersey ya na Monaco. Ọ họọrọ ya ụtụ na 14th arrondissement (district) na Paris ebe a mụrụ ya na nne na nna Ivorian na 17 August 1994, na ga-eyi otu nọmba maka Chelsea.
Tiemoue Bakayoko Nwa akwukwo akuko nke oma bu eziokwu:Deschamps bụ onye ofufe
Onyeisi France bụ Didier Deschamps bụ onye na-akwụ ụgwọ zuru oke nke Bakayoko.
Onye na-agba chaa chaa nke 1998 World Cup maara otu ihe ma ọ bụ abụọ banyere ihe ndị na-eme n'ime ihe egwu. Ọ kpọrọ Bakayoko ka o sonye n'òtù French otu izu mgbe ọ gụsịrị ọrụ dị ukwuu n'iwepụ Manchester City site na Europe. Deschamps kwuziri, sị: “Ọ dị ike, na-eme ihe ọ bụla, na-eme mkpebi dị mma, na-eme ihe mgbaru ọsọ ma bụrụ onye gbara agba gburugburu.”
Tiemoue Bakayoko Nwa akwukwo akuko nke oma bu eziokwu:Isi nke isi ya bụ obodo dị ala
Oge ọ bụla Manchester City ga-abata na Stamford Bridge iji hụ na egwu egwu Bakayoko, ha ga-amarakwa na ọ ga-emerụ ya. Ekele akụkọ ihe mere eme.
Laa azụ na March, nnukwu onye nkụzi 13 nke oge ya mara ikpe Pep Guardiola's City na Njikọ Njikọ na-egbu mgbu nke 16 na-apụ na mgbaru ọsọ. Obodo rutere n'isi nke na-achịkwa eriri ahụ mgbe mmeri 5-3 ga-emeri. Na 19 nkeji iji gaa, ha bụ 6-5 n'ihu, ọ bụ nanị maka Bakayoko ka ọ gbanye ụlọ Thomas Lemar ka ọ ghara inye Monaco nnukwu mmeri. “Ọ bụ nnukwu ọ joyụ ịkọ na Champions League. Atụghị m anya na nke a, ” o kwuru.
Tiemoue Bakayoko Nwa akwukwo akuko nke oma bu eziokwu:Ihe mere Chelsea FC ji bịanye aka na ya
A ga-agwa eziokwu ahụ. Ha zuuru ya site na atụmatụ Mourinho. Onye pụrụ iche hụrụ ya n'anya n'ihi na o zutere nkọwa ya. (Ike, Ike na Ndenye).
Ihe mere Chelsea ji bịanye aka Bakayoko
Tiemoue Bakayoko họọrọ Chelsea kama Manchester United n'ihi na ọ na-amasị Antonio Conte na José Mourinho. O nwedịrị ike ịkpọ oku site na Onye Pụrụ Iche nke mere ka ọ daa mbà n'obi.
Bakayoko kwuru n'oge ọ bịarutere Chelsea: "Ọ dị ịtụnanya na Mourinho na-akpọ m, ọ bụ ezie na a dọrọ m aka ná ntị tupu ọ ga-akpọ m òkù n'ụzọ kachasị nghọta. M gere ntị na arụmụka ya banyere ihe mere m ga-eji gaa United. Ọ dịghị ama ihe ọ bụla, emeela m ka m na-ele Chelsea ma ọ bụghị ya. Ịbanye maka Chelsea bụ ihe nkịtị nye m n'ihi na ọ bụ osisi m hụrụ n'anya nke ukwuu n'oge m bụ nwata. "
Ihe Mere Mourinho Ji Agbahapụ Bakayoko
Ikekwe ihe ọzọ kpatara esemokwu kpụ ọkụ n'ọnụ n'etiti Jose Mourinho na Antonio Conte.
Tiemoue Bakayoko Nwa akwukwo akuko nke oma bu eziokwu:Na-abịa Chelsea na Jet n'onwe
Tiemoue Bakayoko nwetara Chelsea ndị na-anụ ọkụ n'obi na-enwe obi ụtọ site n'itinye onwe ya foto nke onwe ya na-abanye n'ụgbọelu nke onwe ya nke e mere iji gbaga London si France. Ụgbọ mmiri a kpọgara ya na London iji sonyere Bad. Nke a bụ nleta ya na-arịa ọrịa ma bịanye aka na Chelsea.
Bakayoko banyere n'ụgbọelu na Chelsea FC
Ọ soro foto ahụ soro ozi ahụ: "Plane, Ka anyi jee ... M ga - enwe ezigbo izu na Chelsea FC" esonyere otu ụzọ ụgbọelu emojis.
Bọchị agbanwee: August 22, 2020